Ka waran haddii Bloggers ay ku dhaqaaqeen Strike? | Martech Zone
Jimco, Nofeembar 23, 2007 Sabti, Noofembar 24, 2007 Douglas Karr
Markii aan qoro qoraal sidan oo kale ah, waxaan dareemaa inaan hubaa inaan ka xanaaqayo Google Awoodaha-noqo. Awoodda balooggeyga ee 'la heli karo' ayaa fure u ah guusheeda. Xaqiiqdii, in kabadan kalabar booqdayaashaydu waxay ka yimaadaan makiinadaha raadinta maalin kasta, badankoodna waxay ka yimaadaan Hooyo Google. Waxaan u shaqeeyaa si adag si aan u hubiyo inaan jiifsaday rooga gaduudka ee Google oo ay weheliso dhammaan sharafta iyo duruufaha ka dhigaya inay igu dhoola caddeeyaan.
Google ayaa dul dhigtay guntetka dad badan oo dad ah oo ciqaabaya 'xiriiriyeyaasha la bixiyay' waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Qaarkood xitaa way jireen lagu qasbay inuu qoro oo uu xayaysiiyo warqad isa soo dhiibis ah.
Laakiin waan ka sii daalayaa. Ha igu qaldan, wali aad ayaan uga baqayaa Google waxaanan isticmaalaa barnaamijyadooda maalin kasta. Iyagu waa shirkad aan caadi ahayn waana ku faraxsanahay in joogitaankoodu ka dhigayo kuwa waaweyn ee kale inay surwaalka ka fiiqdaan. Mid ka mid ah sababaha aan u jeclahay internetka waa si fudud maxaa yeelay waa isku mid barbaro.
Immisa ayey Google ka sameysaa Blog-kan?
Waxaan ku qoray qoraallo kor u dhaafaya 1,000 qoraal boggan oo waxaan kahelaa qiyaastii 500 oo booqdayaal ah maalin kasta Google. Aynu nidhaahno, kaliya dood darteed, in Google uu sameeyo 10 senti mar 10kii baaritaan. Marka 500 raadis ee aan imid, waxaa jiray 50 baaritaan oo xiriir la bixiyay ayaa la riixay, oo u dhigma $ 5.00. Si aan ugu caddaalad fidiyo Google, waxaan ahay 1 ka mid ah 10 natiijooyinka bogga ku yaal, markaa aan dhahno waxaan kaa caawinayaa inaan u nisbeeyo 50 senti khadka hoose ee Google maalin walba. Dhamaadka sanadka, waxaa laga yaabaa inaan ka caawiyey Google sameynta $ 100.
Waan garwaaqsaday inay tani tahay xisaab madmadow, laakiin ujeedkeygu waa kan - waxaan qoreynaa waxyaabo sifiican ugu tilmaamaya Google… Google-na waxay awood u leedahay inay iibiso xiriirada PAID oo ku saleysan waxyaabahaas. Google wuxuu lacag ka helaa Awooddeenna ah inuu si wanaagsan wax ugu qoro uguna muujiyo, laakiin looma oggola inaan ka faa'iideysano waxyaabahaas annagoo ka wakiil ah kuwa kale. Waxa ka dhigaya boggeygu mid soo jiidasho leh xayeysiiyayaashu maahan aqriska, sidoo kale waa meeleynta Mashiinka Raadinta. Google waxay asal ahaan sheegaysaa inay iyagu leeyihiin darajadeenna, annagana innagama nihin, in kasta oo aan nahay kuwii hawsha adag oo dhan u qabtay sidii aan halkaas ku gaari lahayn!
Shirkadaha Xawaareynta Dilka Google
Shirkadaha sida PayPerPost lagu hoos geyn doonaa, iyo kuwa kale oo la mid ah Xayeysiiska Text Link lagu qasbay inay dhulka hoostiisa galaan. Google wuxuu bilaabay dagaal wuxuuna si buuxda diyaar ugu yahay inuu naga wada qaado maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaan saameyn ku yeelano xarigooda hoose.
Laakiin miyaanan gacan ka geysan sidii loo wadi lahaa xariiqda hoose? Waxaan u maleynayaa inaan sameynay! 75,000,000 baloogyada internetka ayaa ku wata TON waxyaabo aad u wanaagsan oo ku saabsan albaabka Google. Halkii aan wax ka sugi lahayn Google, waxaan ka baryaynaa oo u ducaynaynaa inay si fiican noo tilmaamaan.
Nidaamka jajab tobanlaha ee Dewey
Google u sheegida dadka wax qora ee wax qora iyo waxa ay ku sameyn karaan iyo waxa aysan ku sameyn karin baloogyadooda waxay la mid noqon doontaa nidaamka Dewey Decimal System oo qorayaasha ugu sheegaya waxa ay karaan iyo wixii aysan ku qori karin buugaagtooda.
Google oo dharbaaxo ku haysa qaar ka mid ah dadka wax qora ee wax soo qora oo bixiya xiriiriyeyaal ayaa ah hab caan ah oo inta badan ay isticmaalaan keli-taliyeyaasha iyo sayid-addoontu. Ka saar xoogaa kuwa diiddan darajooyinka oo waxaad siisaa karbaash wanaagsan… dadka kale oo dhami way sii shaqeyn doonaan oo aamusi doonaan.
Dewey ilaa Qoraaga, “Qof ma bixiyay lacag lagu xuso buuggaaga? Waan ka xumahay Mudane Qoraa, waxaan kaa soo jiidaneynaa tusmada. Haddii dadkaasi ay rabaan in la ogaado, u sheeg inay lacag na siiyaan waxaanan siin doonnaa meelaynta ay u baahan yihiin.
Qoraa, "Marka sidee layga doonayaa inaan lacag sameeyo?"
Dewey, "Hagaag, markaad kujirto tixraacayaga waxaad heli doontaa akhristayaal badan oo badan."
Qoraa, "Sug, miyaanay taasi kaa caawin doonin inaad sii wado kala sooc wanaagsan oo soo jiidan doona akhristayaal badan, natiijadaasna, iibin badan oo ka mid ah meelaynta alaabtaada?"
Dewey way qososhay, “Waa hubaal! Laakiin haddii aadan na dhageysan, qofna ma aqrin doono buuggaaga. ”
Ma sheegayo, gabi ahaanba, Google deynta aniga Waxaan si fudud u aaminsanahay inay tani tahay tusaale kale oo weyn oo shirkad caajis ah oo isku dayaysa inay ilaaliso ilaha dakhliga aasaasiga ah iyada oo ku mashquulsan wiilka yar. Halkii laga horumarin lahaa habab wanaagsan oo lagu falanqeeyo xogta macnaha guud iyo kala soocida iskuxirayaasha lacag-bixiyaha ah iyo kuwa isku-xidhka dabiiciga ah, Google ayaa qaadaysa wadada fudud.
Waa tan su’aasha, maxaa dhacaya haddii aan aadno “On Strike”? Kawaran haddii 75,000,000 baloogyadu ay go'aansadeen inay tuuraan faylal aalado ah oo ay ka joojiyaan Google inay muujiso iyaga… dhammaantood! Google maxaa looga hadhi doonaa waqtigaas? Waxaa looga tagi lahaa war-saxaafadeedyo iyo websaydho shirkadeed. Dhamaadka maalinta, miyaanay ahayn kuwa xiriirka la bixiyay? Halkee ayuu Google joogi lahaa la’aanteen?
Waan ogahay halka aan ka maqnaan lahaa Google, in kastoo, markaa waxaan noqon doonaa adeege wanaagsan oo raaca qawaaniinta.
Hase yeeshe, maahan inaan jeclaado sharciyada, in kastoo.
Tags: kormeerka deegaankafalanqaynta saameyntadhinacyo badanpublisherfalanqaynta dareenkaSlideris dhexgalka bulshada crmfalanqaynta warbaahinta bulshadakormeerka fiidiyahafalanqaynta fayraska
Nov 24, 2007 at 12: 43 AM
tani waxay i xasuusinaysaa qoraalkii aan qoray maalin dhaweyd
waa sanduuqa ciidda ay wataan ilaa ay mid ka mid ah oo sanduuqa sanduuqa fiican wata ay la yimaadaan… si fiican u maleynayaa waa inaan ku ciyaarnaa xeerarka google
Nov 24, 2007 at 8: 27 AM
Waxaan u maleynayaa haddii aad kuxirantahay xaaladaada tilmaanta si aad wadada ugu wado taraafikada si aad lacag u sameyso waxaad ku fiicnaan laheyd inaad ciyaartid ciyaarta google. Ama haddii kale, sidaad sheegtay, ku qor noodhadh u sheegaya aalado google-ka inay baxaan.
Dareen-celintaydii ugu horreysay waxay ahayd mid fudud… maxaa diidaya inaad qorto nuxur wanaagsan si dadku kuugu helaan akhristahaaga quudinta? Marnaba ma googalin oo ma helin balooggaaga laakiin waxaan arkay iyadoo lagu xusay qof elses blog ah oo aan jeclahay kuna daray akhristaha.
Qaabka kale ee ugu dhaqsaha badan ee aan ku aqaano wadista waxyaabaha ku jira waa inaan si xun wax uga qoro. Always Marwalba waxaan helaa 10x-ka taraafikada markii aan wax jajabiyo oo aan kasoo horjeedo kaliya qoritaanka tayada "B".